Deliver Meals - Meals on Wheels
Bixinta cuntada waa hab fudud oo abaalmarin leh oo lagu caawiyo waayeelka iyo dadka naafada ah ee u baahan cunnooyinka kulul iyo booqashada maalinlaha ah ee wejiga saaxiibtinimada leh, waadna ku sameyn kartaa qadada! Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad isqorto, waxaadna kugu xirmi doontaa barnaamijka Cuntada ee Wheels-ka xaafaddaada si aad u bilowdo.
Markii aad tabaruce ugu shaqeyso Cunnooyinka Gawaarida inta lagu jiro saacaddaada qadada, waxaad sameyneysaa qaybtaada si aad u damaanad qaado cuntada in la gaarsiiyo in ka badan 4,000 oo qof oo u baahan dhammaan daafaha Minneapolis / St. Deegaanka Paul metro. Waad iskaa wax u qabso ku bixin kartaa inaad cuntooyinka siiso usbuuciiba hal mar, bishiiba mar, saaxiibkiis, koox ama kaligaa - wax kastoo adiga kuu fiican!
Bixinta cunnooyinka sidoo kale waa waxqabad bulsho oo weyn - waxaad ku sameyn kartaa saaxiib ama koox waadna baran doontaa deriskaaga oo iyaguna wax geynaya. Adiguna waad ka tagi doontaa adoo og sideed ilaa 10 qof oo wadadaada ah inay heleen nafaqada iyo xiriirka shakhsiyeed ee ay u baahan yihiin.
Saxiix maanta si aad cunto u keento oo ogow inaad saameyn deg deg ah ku yeelan doonto nolosha dadka qaata ee xaafadaada ah. Haddii aad su'aalo qabtid, eeg liiska su'aalaha badanaa la isweydiiyo, emayl [email protected] ama wac (612) 623-3363 wixii macluumaad dheeraad ah.
Su'aalaha Badbaadinta Shakhsiyadeed
Sideen isuqoriyaa si aan tabaruc ugu yeesho Cuntooyinka Lugaha Lugta?
buuxi foomka iskaa wax u qabso ah ama naga soo wac (612) 623-3363 waxaan kuu gudbin doonaa barnaamijka deegaankaaga.
Sidee shaqo-wareejinta caadiga ah ee tabaruca u shaqaysaa?
Tabaruceyaashu waxay u kaxeeyaan goobta barnaamijka, waxay ka qaadaan 8-10 cunto oo ku kaydsan baakado kuleyl ah oo si fudud loo qaadi karo, waxayna geyn karaan guryaha iyagoo isticmaalaya marin uu barnaamijku dejiyay. Waxaad heli doontaa tilmaamaha wadista iyo gudbinta oo faahfaahsan - diyaargarow lama huraan ah. Mar alla markii jidkaaga la dhammeeyo, waxaad alaabta ku celin doontaa goobta barnaamijka.
Mudo intee le'eg ayay qaadataa in la keeno cuntada?
Wadooyinka gaarsiinta waxaa loogu talagalay inaysan qaadan wax ka badan hal saac. Dadka badankood, way fududahay in la geeyo cunnooyinka inta lagu jiro saacadda qadada.
Goorma ayaa cuntada la keenayaa?
Cuntada guud ahaan waxaa la bixiyaa inta u dhexeysa 11 subaxnimo ilaa 1 galabnimo Isniinta ilaa Jimcaha.
Immisa jeer ayaan cuntada geyn doonaa?
Sida badan intaad jeceshahay! Qaar badan oo ka mid ah mutadawiciinteennu waxay doortaan hal maalin usbuucii ama hal maalin bishii si ay cunto u geeyaan. Ballanqaad u noqo inta jeer ee aad ku qanacsan tahay, waxaadna markasta go'aansan kartaa inaad wax badan keento mustaqbalka.
Miyaan tabaruc ku sameyn karaa saaxiibkay ama koox kale?
Haa! Bixinta cunnooyinka waa waxqabad bulsho oo weyn oo aad ku qaban karto saaxiib ama koox ka ballaaran. Sidoo kale waa wax iska caadi ah kaniisadaha, bulshada ama kooxaha goobta shaqada inay abaabulaan kooxo gaarsiinta. Wax badan ka baro sida loo bilaabo Kooxda Gaarsiinta Goobta Shaqada.
Tabaruce kale ma i raaci doonaa safarkayga?
Xitaa haddii aad keli tabarucid, waxaad codsan kartaa in lagugu daro tabaruce kale oo jidkaaga ah. Haddii aad tahay mutadawiciin cusub, way ku caawin kartaa inaad raacdo qof horay wax u gaarsiiyay.
Ma jiraa xarun wax la geeyo oo ku dhow meesha aan ku noolahay ama aan ka shaqeeyo?
Iyada oo leh 35 meelood oo geyn ah dhammaan magaalooyinka Mataanaha, fursadaha waxaa jira barnaamij u dhow gurigaaga ama shaqadaada.
Maxaa dhacaya inta lagu guda jiro dhalmada kasta?
Mutadawiciin ayaa cuntada u keenaya qof kasta oo qaata albaabkiisa. Qeyb ka mid ah madaddaalada gaarsiinta waa la booqashada dadka qaata laakiin waxaa muhiim ah in booqashooyinka laga dhigo mid kooban oo kugu filan inaad ku dhammaystirto wadadaada waqtiga. Haddii aad ogaato in qofka ku qaata uu u baahan yahay caawinaad dheeraad ah, waxaad la xiriiri kartaa iskuduwaha barnaamijkaaga.
Ma jiraan fursado ka sokow keenista cuntada?
In kasta oo la helayo mutadawiciin buuxiya dariiqooyinka gudbinta ayaa ah baahiteenna ugu weyn, waxaa jira qaabab kale oo looga qayb qaato. Waa tan liiskayaga fursado kale oo iskaa wax u qabso ah.
Fursado Tabaruce oo Badan
In kasta oo cunno la keenayo ay tahay baahideena ugu weyn ee iskaa wax u qabso ah, waxaa jira habab kale oo tabaruc loogu sameeyo Cunnooyinka Gawaarida.
Sii akhri xog dheeraad ah